INokia 8 iqinisekisile nge-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina | Iindaba zeGajethi
INokia 8 iye yenye yeetheminali ezilindelweyo kulo nyaka, ikakhulu kuba ibikukuphinda kuvele uphawu kwishishini lesiphelo esiphakamileyo, ixabiso elingaphezulu kwexabiso elinomdla: i-599 euros. Ukusukela nge-20 kaSeptemba odlulileyo, iyafumaneka iyathengiswa ngokuthumela ngenqanawe kweentsuku kwiwebhusayithi esemthethweni yakwaNokia. Lo mzekelo thina ibonelela nge-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina ngaphezulu kwamanani alungileyo okusetyenziswa ngabasebenzisi abaninzi, kodwa isenokungabi yeyabasebenzisi abaninzi abafuna indawo yokugcina yangaphakathi ngakumbi ukongeza kwi-256 GB esinokuyandisa sisebenzisa ikhadi le-SD.
Ngokungafaniyo nabanye abavelisi, kubonakala ngathi umenzi we-HMD uceba ukumilisela e-Europe inguqulelo yeNokia 8 ene-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina ngaphakathi. Kubasebenzisi abaninzi abane-4 GB ye-RAM baninzi, kodwa kunokuba yeyona nto ifunwa kakhulu, abo basebenzisa usetyenziso olutya izixhobo ezininzi okanye abo Bafuna izicelo zokuvula ngokukhawuleza kwaye bakwazi ukutshintshela phakathi kwabo ngaphandle kokulibazisa, le modeli yeyona nto bayifunayo.
Nge-6 GB ye-RAM, isixhobo asizukuvala izicelo rhoqo, kuba imemori ivumela ulwazi ngakumbi ukuba ligcinwe ukuze lisoloko likhona xa kukho imfuneko. Ukongeza, enkosi kwi-128 GB eyongeze kwi-256 esisinika ngekhadi le-SD sinendawo eyaneleyo yokurekhoda iividiyo ezingama-4k ngaphandle kokubandezeleka kukusikelwa umda kwendawo oku kubangelwa bubungakanani bayo obukhulu.
Le modeli intsha iza kuthatha imakethi yaseJamani ekuqaleni kwe-20 ka-Okthobha, kodwa kunokwenzeka ukuba kungekudala emva kokufumaneka kwayo kuzakwandiswa ukuya kumazwe aseYurophu. Ixabiso lale modeli liza kuba ngama-euro angama-669, ii-euro ezingama-70 ngaphezulu kwemodeli ene-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina kwangaphakathi. Ngokumalunga nokufumaneka kwemibala, asazi ukuba umenzi uya kusinika uluhlu olufanayo njengeNokia 8 yesiqhelo okanye uya kunciphisa inani ngokulinciphisa kwisibini. Into ecacileyo yeyokuba ngaphezulu kwama-euro angama-70 ngaphezulu, kufanelekile ukulinda ezinye iintsuku ezimbalwa ukuba ufuna ukuvuselela isiphelo sakho esidala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » INokia 8 ene6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina iqinisekisiwe
Zininzi ngakumbi iirobhothi eziyinyani ngokubulela kwezi zihlunu zintsha zithambileyo